Madheshvani : The voice of Madhesh - ‘सरिता गिरीबाट अक्षम्य अपराध भयो, उहाँले माफी माग्नैपर्छ, नभए पार्टीले निलम्बन गर्छ’
‘सरिता गिरीबाट अक्षम्य अपराध भयो, उहाँले माफी माग्नैपर्छ, नभए पार्टीले निलम्बन गर्छ’
डा.शिवजी यादव, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
० जनता समाजवादी पार्टीले नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधनको विधेयकमा समर्थन गरेको छ तर सांसद सरिता गिरीले संशोधनमाथि संशोधन हाल्नु भएको छ । यसले जसपाको दोहोरो नीति देखियो नि ?
— सांसद सरिता गिरीको संशोधनमाथिको संशोधनले आमजनसमुदायमा अलिकति अन्योलता सिर्जना गरेको छ । जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता त भयो तर त्यहाँबाट आधिकारिकरुपमा पत्र नआइसकेसम्म जसपाले नियमानुसार सांसद् गिरीलाई कुनै किसिमको कारबाही गर्न सक्दैन । हाम्रो पूरानो पार्टी समाजवादी जुन संसदमा दर्ता छ, समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संशोधनमाथिको संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । सांसद गिरीलाई कारबाही गर्ने दिशातर्फ गइसकेको छ । हाम्रा वरिष्ठ नेता डा.बाबुरामजीले पनि प्रष्ट्याइसक्नुभएको छ । त्यसैले राष्ट्रियताको सवालमा जसपाप्रति कुनै शंका उपशंका राख्न पर्दैन । नक्सासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा जसपा पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ ।
० तर, सांसद गिरीले संशोधनमाथिको संशोधन फिर्ता नलिने अडानमा हुनुहुन्छ नि ?
— उहाँ हाम्रो पार्टीको नेता हुन्, संसदीय दलको उपनेता पनि हुनुहुन्छ । उपनेता जस्तो गरिमामय पदमा बसेर पनि उहाँले केटाकेटीपन व्यवहार देखाइरहनु भएको छ । उहाँको यस्तो व्यवहारविरुद्ध पार्टीले कारबाही गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ । उहाँले संशोधनमाथिको संशोधन फिर्ता लिनैपर्छ ।
० राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएर जसरी उहाँले संशोधनमाथिको संशोधन हाल्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा पार्टीले तुरुन्त कारबाही किन गरेन ?
— उहाँलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । कारबाहीको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, विधि र विधान हुन्छ । फिर्ता लिनुस् भनेर पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ । उहाँले मिडियाहरुमा संशोधन फिर्ता लिन्न भनेर त भन्नुभएको छ तर लिखितरुपमा पार्टीलाई जानकारी गराउनुभएको छैन । मलाई विश्वास छ कि उहाँ संशोधन फिर्ता लिनुहुन्छ । दलीय व्यवस्थामा संसदमा विचार राख्दा पार्टीमार्फत् नै राख्ने हो । संसदमा स्वतन्त्र सांसद भएको हैसियतमा मात्रै व्यक्तिगत कुरो राख्न पाउनुहुन्छ । अथवा पार्टीको अनुमति लिएर मात्रै कुनै मुद्दामा संशोधन दर्ता गराउन पाउनुहुन्छ । तर पार्टीले संशोधन हाल्न अनुमति दिएको छैन । त्यसैले पार्टीले संशोधन फिर्ता लेऊ भनेपछि लिनुपर्छ, लिनुभएन भने उहाँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ । कारबाही भयो भने उहाँको पद रहँदैन र पदै नरहेपछि उहाँको संशोधनको कुनै अर्थ नै रहँदैन । उहाँले आफू मधेशी, हिन्दी भाषी भनेर जसरी प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ, त्यसले गर्दा सम्पूर्ण मधेशी जनतामाथि नै शंका उब्जाउने काम गर्नुभएको छ । उहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ कि अहिले सम्पूर्ण मधेश राष्ट्रको पक्षमा छ । राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि मधेशी एक इन्च पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन ।
० भनेपछि उहाँले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएन भने उहाँको पद नै जान्छ ?
— यदि उहाँले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएन भने पार्टीले त कारबाही गर्छ नै । उहाँले आफै आत्मसमीक्षा गरेर गलती भयो भनेर स्वतः राजीनामा गर्नुपर्छ । राष्ट्रको सवालमा सरिता गिरीबाट अक्षम्य अपराध भयो । किनभने सांसदले संसदमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता विरुद्ध कुनै क्रियाकलाप नगर्ने शपथ खाएका हुन्छन् ।
० उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्दा तपाइँलाई लाग्छ कि उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ त ?
— यदि उहाँले आत्मग्लानी महसुस गर्नुभएन र आत्मसमीक्षा गर्नु भएन भने मुलुकमा अब नयाँ बहस सुरु हुन्छ । अंगीकृत नागरिकको आफ्नो जन्मभूमिप्रति माया यस्तो हुन्छ त ? अंगीकृत नागरिकता लिइसकेपछि जुन देशको नागरिक भएपनि जुन भूमिमा जन्मेका छन्, त्यो मायाले यस्तोसम्म गर्दोरहेछ त ? यस्ता विषयहरुमा अब बहस सुरु हुन्छ । जसले गर्दा अंगीकृत नागरिकको विषयमा अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्दछ । राष्ट्रियताको सवालमा राजनीतिक अधिकार कतिसम्म दिने, नीति कानून बनाउने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने कुरोमा गम्भीर बहस उठ्यो । यसमा सोच्न राज्य बाध्य हुनुपर्छ ।
० सरकारको संशोधनमा नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण उल्लेख नभएको सांसद गिरीको तर्क छ, त्यसैले संशोधनमाथि संशोधन हालेको उहाँ भन्नुहुन्छ नि ?
— संविधानमा सरकारले अहिले किन संशोधन गर्दैछ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । ती भूमिहरु निर्विवाद नेपालकै हो भनेर हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । त्यतिबेला कुनै कारणवश नेपालले आफ्नो भूमि भारतलाई प्रयोग गर्न दियो, त्यसले गर्दा अहिले देशले यो हविगत भोग्नुपर्ने ? अहिले सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह पनि गठन गरेको छ । यो समस्याको समाधान कुटनीतिक वार्ता नै हो । वार्ताअघि सरकारले हामीसँग भएका सम्पूर्ण प्रमाणहरुको एउटा दस्तावेज बनाउने हो । त्यसकै लागि विज्ञ समूह गठन भएको हो ।
० सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहका बारेमा पनि सांसद गिरीले भन्नुहुन्छ कि मैले उठाएको कुरा प्रमाणित भयो भन्नुहुन्छ हुन्छ त ?
— तर्क गर्दा त जेपनि गर्न सकिन्छ । दुई देशको बीचमा वार्ता गर्नुछ भने हाम्रा सम्पूर्ण प्रमाणहरु जुटाउनका लागि विज्ञ समूहको आवश्यता त छँदैछ नि । ती भूमिहरु नेपालको हो कि होइन भनेर सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको होइन । ती भूमिहरु नेपालको हो नै तर वार्ताका लागि हामीसँग रहेका सम्पूर्ण प्रमाणहरु संकलन गर्ने जिम्मेवारी विज्ञ समूहलाई दिइएको छ । यस विषयमा सांसद गिरीले मेरो गोरुको बाह्रै टका भन्ने किसिमले तर्क गर्नुको तुक छैन ।
० भनेपछि सरकारसँग ठोस प्रमाणहरु छन्, यसमा कुनै दुईमत छैन ?
— निश्चितरुपमा सरकारसँग सम्पूर्ण प्रमाणहरु छन् । प्रमाणहरु विभिन्न निकाय र विभागहरुमा हुन्छन् । कतिपय दस्तावेजहरु अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुमा होला । ती कुराहरु संकलन गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने लगायतका कुराका लागि विज्ञताको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैका लागि विज्ञ समूह बनाइएको हो ।
० विज्ञ समूहले यथेष्ट प्रमाणहरु जुटाउन सकेन भने के हुन्छ ?
— हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छैन भन्ने कुरा सोच्दै नसोच्नुस् । सम्पूर्ण प्रमाण र तथ्य छ । भोली वार्तामा बस्दा कुन डकुमेन्ट, कसरी, कहाँ राख्ने भन्ने कुराको अन्तिम रुप विज्ञ समूहले दिने हो । अर्को मुलुकसँग वार्ता आफ्ना प्रमाणहरु विज्ञताको हिसावले प्रस्तुत गर्ने हो । हामी आफ्ना प्रमाणसहित कसरी प्रस्तुत हुने यी सब कामका लागि नै विज्ञ समूहको आवश्यकता महसुस भयो र सरकारले विज्ञ समूह बनाएर राम्रो काम गरेको छ ।